Zvekushanda Nesimba Ndezvekare Here?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Alex anotura befu paanosimudza rimwe bhokisi achiriisa murori yekambani yaanoshandira inoita zvekutamisa vanhu. Anozvibvunza kuti, ‘Sei ndichingoramba ndiri pabasa iri risina pundutso? Ndichazobudirirawo riini? Upenyu hwaizova nani kudai ndisingafaniri kushanda!’
SaAlex ataurwa pamusoro apa, vanhu vakawanda mazuva ano havafariri kushanda nesimba. Mumwe makanika anonzi Aaron anoti, “Vakawanda vanofunga kuti kushanda basa rinoita serepasi kunonyadzisa. Nechemumwoyo vanenge vachiti: ‘Ndiri kumbobata-bata kusvikira ndazowana rimwe riri nani.’”
Sei vakawanda vasingadi kushanda nesimba? Zvimwe inyaya yezvavanonzwa mune zvinobudisa nhau, kuti hunonzi upenyu kugara muumbozha wakadekara hako. Matthew uyo anoita basa rekugadzirisa zvivako anoti, “Vanhu vanofunga kuti kana uchifanira kushanda nesimba kuti urarame, zvinokuomerawo kuti uzobudirira.” Shane uyo anoona nezvekuchengetedzwa kwezvivako anobvumirana naMatthew. Anoti: “Vanhu havachadi kushanda zvinoenderana nemari yavanobhadharwa.”
Asi vanhu vakawanda vakabudirira vanofarira kushanda nesimba. “Ndinofunga kuti kushanda nesimba kunoita kuti unyatsogutsikana, kunyanya kana uine chinangwa chakanaka,” anodaro mumwe anoita zvekuvaka anonzi Daniel, ane makore 25. Andre, ane makore 23 anobvumiranawo nazvo. Anoti, “Ndinofunga kuti kushanda ndiko kunoita kuti munhu afare. Kusashanda nesimba kunoita kuti munhu agare asingafari, achingosurukirwa chete!”
Vanhu vakadai saDaniel naAndre vakaita sei kuti vafarire kushanda nesimba? Vakashandisa zvinodzidziswa neBhaibheri muupenyu hwavo. Bhaibheri haritsigiri zvachose usimbe, asi rinokurudzira kushanda nesimba uye kutsungirira. Bhaibheri haringotiudzi kuti tishande nesimba chete asi rinoratidzawo zvatingaita kuti tifarire basa redu.
Ndezvipi zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukubatsira kuti ugutsikane nebasa rako? Tinokukumbira kuti uone zvimwe zvacho zvichakurukurwa munyaya inotevera.